WAALIDIINTA | georgedixonprimary
Waalidiinta iyo inta badan xubnaha qoyska ayaa si weyn loogu soo dhaweynayaa dugsiga. Waxaa jira fursad maalinle ah oo ay kula kulmi karaan Maamulaha, Wakiilka Maamulaha ama macalimiinta fasalka.
Kormeerayaasha Ofsted waxay soo gudbiyeen waxyaabahan soo socda: 'Wadahadal lala yeesho waalidiinta iyo natiijooyinka ka soo baxa baadhitaanada dugsigu waxay muujinayaan in waalidku ku faraxsan yihiin daryeelka iyo waxbarashada.
Marka laga reebo Waalidiinta Waalidiinta caadiga ah saddex jeer sannadkii iyo warbixinta qoraalka ah, kulamada fasalka iyo 'Wareegyada Wanaagsan'; waalidiinta waxaa lagu martiqaaday inay iskuulada si wadajir ah ugala shaqeeyaan caruurtooda ku jira siminaarada INSPIRE iyo sidoo kale inay nala midoobaan xafladaha guusha ilmahooda ama dhacdooyinka iskuulka iyo xafladaha oo dhan sida 'Subaxii ugu Wanaagsanaa Subaxda Kahor' ee taageerada Macmillan Cancer, Divali , Ciidda, Christmas iyo Vaisakhi iyo kuwa kale.
Waxaan nahay dugsi caafimaad leh waxaanan siinnaa miro dhan ardayda KS1. Waxaan ku dhiirigelineynaa dhammaan ardayda iyo waalidiinta in ay cabaan biyo badan waxayna leeyihiin maalmo dhaqdhaqaaq jireed oo joogto ah ama maalmo caafimaad halkaas oo carruurta iyo waalidiintu leeyihiin jimicsi joogta ah oo jimicsi lagu raaxeysto.
Waxaan haysanaa makhaayad aan si macquul ah loo dhisin oo laga helo cunnooyinka dugsiga ee caafimaadka leh. Waxaa jira roodhi guriga laga sameeyo iyo basas saladh nafaqo leh oo la heli karo maalin kasta ardayda ardayda dhigata fasalka. Waxaanu qadeynay qadada qadada laakiin waxaan ku weydiineynaa in cuntadani ay nafaqo leedahay. Shaqaalaha kantinimada waxay la shaqeeyaan dugsiga oo waxay abaabuleen maalmo cunto oo gaar ah halkaas oo aan isku dayi karno cunnooyinka caalamiga ah ee kala duwan. Kuwani waa mid aad loogu jecel yahay dhammaan ardayda iyo shaqaalaha oo qashin qado carruurtu waxay iibsan karaan cuntada haddii ay sidaa rabaan.
Waxaan leenahay shaqaale badan oo taageeraya taageerada 'bixinta daryeelka' ee ilmahaagu u qalmo. Kaaliyeyaasheena Macalimiintu waxay si fiican u tababaran yihiin oo xirfad u leeyihiin heer sare si ay u maareeyaan barashada iyo dhaqanka. Kormeerayaasha Ofsted ayaa qiray in Kaaliyeyaasha Waxbarashadayadu ay waxtar u leeyihiin barashada ardayda.
Qaybta 'Kidz Zone' oo ah 'Kidz buuxa' waa hay'adda bixisa daryeelka ilmaha kahor iyo kadib. Waxaan sidoo kale helnaa adeegyo shaqaale taageera qoyska si uu noogu caawiyo wadadayada si aan kor ugu qaadno waqtigii loogu talagalay iyo ka qaybgalka ugu yaraan 96%. Dhammaan dugsiyada Dugsiga Ladywood waxay diidaan inay fasax ka bixiyaan fasax waqti go'an
Hoos waxaad ka heli doontaa xiriiro badan oo ku siinaya macluumaadka aad u baahan tahay si aad u taageerto ilmahaaga dugsiga.